Ọ bụrụ na ị na-azụ ihe a eji ụgbọ ala na mgbakwunye na-eme ndị ọzọ fluids na anyị na-atụ aro na ị ego, ị nwekwara mkpa ego na ugbo ala brek. Brek on a ụgbọala bụ otu ihe na-e na-eyi si. Ọ bụ esemokwu n'etiti rotor na pad na kwụsị ụgbọala mgbe ị na-etinye brek. Ọ bụrụ na ma ndị pad na discs e mere nke obi tara mmiri nchara na ị ga-inwe ihe ọ bụla ịkwụsị ike. Ke ibuotikọ emi anyị ga-ekpuchi ịlele n'ihu brek on ụgbọala na gwongworo.
On ọhụrụ ụgbọala na-emeghe rims ọ pụrụ ịbụ pụtara mfe iji nweta a ngwa ngwa ilekiri na ọnọdụ ndị brek. The n'ihu brek bụ n'ebe ọ bụla n'etiti 60 na 70 percent gị nkwụsị ike. Mgbe mbụ ị na-eje ije ruo ụgbọala ị nwere ike lee na n'ihu breeki rotors site na-achọ site na rim na ịlele ọnọdụ ndị rotors. Jide n'aka na ụgbọala bụghị e chụpụrụ, ọ bụghị na ha ga-abụ na-ekpo ọkụ na-emetụ. Olileanya na rims na-emeghe-ezuru ya na ị nwere ike nweta ezigbo ilekiri na ha. Agbalị na-ahụ ma ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ridges gafee rotor. Ọ bụrụ na ị nwere ike arapara mkpịsị aka gị site na rim ị nwekwara ike na-eche na rotor ịchọpụta ma ọ bụrụ na e nwere ridges gafee rotor. Ọ bụrụ na e nwere, e nwere ezigbo ohere na ụgbọala ga-mkpa a breeki ọrụ n'oge na-adịghị. Ọ bụrụ na ndị rotor bụ ọ dị mma na-eji ire ụtọ mgbe ahụ ka bụ ezigbo gosiri na brek na mma udi.
Ị ga-Chọrọ na-emeghe hundu na ego na breeki ọmụmụ. E nwere ma a larịị egosi na mpụga nke breeki ọmụmụ tragaasi, ma ọ bụ na e nwere itinye mkpisi na dịanyā okpu. Jide n'aka na ọmụmụ bụ n'ime kpọmkwem ókè. Ọ bụrụ na ọ bụ ala ọ pụrụ ịbụ ọzọ egosi na ụgbọala bụ na mkpa nke a breeki ọrụ. Dị ka pad eyi, na pistons na calipers ịgbatị ime ebe a na ojiji nke ọzọ ọmụmụ.
Ugbu a aga n'ihu ma na-esi na ụgbọala na-atụgharị mgbanye on, ma adịghị na-amalite ụgbọ. Mara niile nke egosi ọkụ na-akụtu. Does the vehicle have an ABS light or brake light? ABS ìhè bụ Anti-mkpọchi breeki System na n'okpuru oké braking ọnọdụ gbuo oge a gaara braking ike ndị ọzọ wiil na-ụgbọala si na-aga n'ime a skid. Nke a na ìhè bụ na-emekarị odo na-akụtu na a “Breeki” ìhè bụ na-emekarị red. Ugbu a na-amalite ụgbọ na na na na ndị a ọkụ pụọ. Ọ bụrụ na ha gbanyụọ, mgbe ahụ na ihe niile dị breeki usoro kwesịrị na-arụ ọrụ iji. Ọ bụrụ na onye ABS ìhè ma ọ bụ breeki ìhè-anọgide na, mgbe ahụ na breeki usoro bụ na mkpa nke-arụ ọrụ.
Osote, ị chọrọ aga n'ihu ma na ụgbọala na ụgbọala. Mgbe ị na-akwọ ụgbọala na-etinye brek na mara dị ka ihe sterịn wheel-eme. Ka ụgbọala anọgide na-aga na a ogologo akara, ma ọ bụ otú ọ na sere n'otu akụkụ ma ọ bụ ọzọ. The ụgbọala kwesịrị ịnọgide na-aga na a ogologo akara, ọ bụrụ na ọ akwusila n'otu akụkụ ma ọ bụ ndị ọzọ na mgbe ahụ, otu n'akụkụ nke brek na-arụ ọrụ ike karịa ndị ọzọ na-egosi na a breeki ọrụ dị mkpa. Ị na-achọ ige ntị mgbe n'itinye brek. Ka ha na-eme ka a squealing mkpọtụ ma ọ bụ na-egweri mkpọtụ? Ọ bụrụ na ha squeal ọ bụ ihe na-egosi na a breeki ọrụ bụ n'ihi. Ọtụtụ ụgbọala na-ugbu a onwem na ihe na-akpọ “Squealers” na breeki pad. E mere ya mere na mgbe pad eyi ala isi ihe ụfọdụ na “squealer” -emetụ rotor eme ka ị mara na ụgbọala kwesịrị pad ma na-enyere chebe rotors. Ọ bụrụ na ị na-anụ na-egweri – ọma ya kwesịrị ịna-gaa arụzi ka nwere ndị na-ele anya na brek.
On ọhụrụ ugbo ala na ị na-atụle ịzụta, ị nwekwara ike ịtụ a ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ ịhụ ma ọ bụrụ na ụgbọala e nọgidere na-enwe site dealer na ọ bụrụ na ọ na-egosi oge maka arụ ọrụ. Otú ọ dị, ụgbọala nwere ike nọgidere na-enwe site dealer otú ndị a ndia nwere ike ọgaghị adị. Otu ọ dịla, tupu ị zụrụ, ka ị na-arịọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike na-ụgbọala gị obodo ụgbọ ka ya enyocha na-enye gị a obere ihe mpempe uche.
Nke a post e kere site na otu nke nwe ma na-enye ya maka ojiji na abamuru nke ọ bụ na-agụ akwụkwọ. Anyị adịghị natara ọ bụla ụgwọ site na ndị ọzọ mmekọ na saịtị a na-ede nke a post.
Tags: ịlele brek, ụgbọala akụkọ ihe mere eme akụkọ